Lammiileen Mooyyaleerraa baqatan maal irratti argamu? - BBC News Afaan Oromoo
Lammiileen Mooyyaleerraa baqatan maal irratti argamu?
Ajjeecha namoota nagaa magaalaa Moyaaleerratti raawwatameen walqabatee namoonni kuma 10,000 olii gara Keeniyaatti baqachunsaanii ni yaadatama.
Mootummaan Itoophiyaas haala tasgabbeessuun lammiileen gara qe'eesaaniitti akka deebii'aniif hojachaan jira jechuun hime ture. Ta'us garuu namoonni dhaabbata baqqattoota addunyaa UNHCR galamaa'an kammiiyyuu gara biyyaa deebii'aa akka hinjiraannee mirkannaafanneera.
Kanuma qulqulleefachuuf baqqattootaafi dhaabbilee gargaarsa naannawa buqqaattoonni kunneen itti argaman keessa hojatan dubbifneera.
Ab Diinoo Aannaa namoota torban sadii dura dhukaasa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaatiin Moyaaleetti baneen ture lubbuu isaaniif sodaachuun qe'eefi qabeenyasaaniirraa buqqa'uun gara biyya ollaatti baqatan keessaa tokko.
Torban lama dura nageenya lubbuu keenyaaf wabii waan hin arganneef biyyatti hin deebinu jedhanii kan turan Ab Diidoon, torban tokko maatiisaanii waliin gara qe'eesaaniitti akka deebii'an himu. ''Gargaarsi ga'aan waan hin jirreefi haalli jirus waan tasgabbaa'eef qe'eetti deebineerra'' jedhu.
"Tasgabbiin jira. Jaarsillee mari'ateera. Amma rakkoon waan dhaabbateef amma deebineerra. Marii uummataa taasifamee irratti walii galamee jennaan deebine,"
Ab Diidoon waan akka deebii'aniif kan isaan abdachisee yoo dubbatanis, "Amma jijjiirama Muummicha Ministiraatiin walqabatee jijjiiramni ni dhufa jennee waan yaanneef namoonni muraasni deebi'uu danda'aniiru. Kanneen hafanis ni deebi'u jennee amanna," jedhan.
Daa'imman isaanii kudha tokko waliin kaampii (da'oo) Soomaree guyyoota 15f kan turan Aadde Ayishaa Goolichaas, erga gara qe'eesaaniitti deebii'anii torban tokko darbuu himu. Erga qe'eesaaniitti deebii'aniis nagana akka jiru dubbatu.
"Namni cufti wal guula hin galle. Nuti garuu erga deebinee torban caaleera. Amma nagaa arganenee nagana buluutti jirra. Dhukaasni banamuutti hin jiru, nagumatti jirra. Mootummaanis waanti sun dogoggora waan jedheefi nutis ammoo lafa keenya dhabuu waan hin barbaanneef deebiine,'' jedhu.
Haa ta'u malee, dhaabbata 'World Vision' Keeniyaatti Qindeessaan Gargaarsa Yeroo Balaa, Obbo Deenkan Odaayoo lakkoofsa namoota gara Keeniyaatti guyyaa guyyaa baqatanii yaa hir'atu malee kan deebii'an akka hinjirre BBC'tti himaniiru.
"Ammas dhufaa kan jiran jiru. Haata'u malee lakkoofsi namoota dhufaa jiranii kan duraarra hir'ateera. Kan daangaa ce'anii dhufan xiqqoodha. Kanaan ala waanti jiru hedduu hin jijjiirasmne. Namni nuti galmeessine keessaa kan gara Itoophiyaatti deebii'e hin jiru."
Maddeen ogantoota Kaawuntii naannoo sanii waabeffachuun BBC'tti akka himanittis, baqqattoota galmaa'anii jiranis gara Kaampii baqattootaa Kaahumaatti dabarsuuf hojjetamaa jira.
Jiraattoonni Magaalaa Moyaaleefi naannawashee nageenya isaanitiif sodaachuun ammalleen daangaa qaxxamuruun gara Keniyaatti baqachaa jiru. Dhaabbileen deeggarsaa ammoo haalichi humna keenyaa oli ta'aa jira jedhu.
Teeppiitti dhaabbileen mootummaa fi dhunfaa erga cufamanii guyyoota shan ta'e
Filannoo Tigraay fi gaaffii baajataa paartilee mormitootaa
Raashiyaan oomisha tallaallii haaraa eegalte
12 Hagayya 2020
8 Hagayya 2020
Beerutitti lammiileen Itoophiyaa miidhamanii turan lama du'an
10 Hagayya 2020
Pireezidantiin Afrikaa Kibbaa mootummaa fi TPLF akka araarsaniif yaadni dhiyaate
Afriikaattii kalaqawwan 10 Covid-19 ittisuuf kalaqaman
''Amallee Miidhamtootarra doorsifni gahaa jira''-Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa
Poolisiin Naayijeeriyaa nama waggaa sadiif maatiin manatti ugguran baraare
Riikoordiin Qananiisaa atileetii Yugaandaatiin cabe